Izinkolelo zesintu ngokuvezwa ngamadlozi ekhaya – The Ulwazi Programme
Izinkolelo zesintu ngokuvezwa ngamadlozi ekhaya
Amadlozi abantu abangasekho emhlabeni bomndeni othile. Kunenkolelo yokuthi noma bengasekho emhlabeni kodwa bayakwazi ukubheka umndeni bawuvikele noma bawuvezele izinkinga ezikhona ekhaya. Kuningi okufihlwa ngabantu abasaphila emhlabeni ngoba bengabonwanga ngabanye bekwenza kodwa amadlozi awafihleleki lutho futhi ayakwazi ukuziveza lezimfihlo. Lapha sibheka izimfihlo ezivezwa ngamadlozi ngokwenzeka kwezinto ezithile ekhaya. Okubi ngezinto ezifihliwe uma sezivela kuba yihlazo ngoba zivela bonke abantu bebhekile. Kubalulekile ukuthi uma kuvela kufanele kulungiswe lawomaphutha asengalungiseka kodwa akusiwo wonke alungisekayo. Umama Bongiwe Mkhizen ohlala endaweni yaseNanda, eCongo usichazele kabanzi ngezinye zezinto abantu abacabanga ukuthi ziyohlala ziyimfihlo kodwa zivele ekugcineni.
Umemulo Womuntu Ongaseyona Intombi Egcwele
Kuqala intombi yayilotsholwa ngezinkomo eziyishumi nanye. Eyodwa inkomo ekamama wentombi ukuthi ukwazile ukugada ingane yakhe yaziphatha kahle. Leyonkomo kamama ebizwa ngomqhoyiso iyathathwa kumuliswe ngayo intombi ukuthi iziphathe kahle ebuntombini bayo. Kodwa thina sigxile lapho umama wentombi efihla ukuthi intombi ayisaphelele. Uma intombi seyenzelwa umemulo uma isisina esigcawini umhlwehlwe uyagqashuka. Lokhu kusuke kutshengisa ukuthi intombi kayisagcwele ngoba phela uma umuntu esayintombi nto umhlwehlwe awugqashuki kwawona.
Ukuganana kwabantu abahlobene
Uma insizwa ishela intombi njengenjwayelo iqala ngokuyibuza ukuthi intombi ingeyakwabani isibongo. Ibe isiyazichaza intombi ukuthi izalwa kephi kanye nensizwa izichaze. Lokho kusuke kwenzelwa ukuthi abantu bangathandani beyizihlobo. Kuyenzeka bathandane abantu beyizihlobo kodwa abanye basuke bengazi ukuthi bayizihlobo. Kuyaziwa ukuthi uma niyizihlobo kudingeka nihlanganiswe noma kushwelezwe ezidalweni noma emadlozini omndeni ukuze nikwazi ukuthi niganane. Kodwa ukunye okuvamise ukwenzeka abasuke bengaziukuthi bahlobene. Kuthi lapho abasemzini belethe umkhehlo (umkhehlo umshado wokuqala absemzini wentombi bezoyihloniphisa). Abasemzini bafika nenkomo, lenkomo isuke ingahlangene nezinkomo zamalobola bathenga nenhloko nesidwaba ugqokiswe. Yilapho intombi isuke isizobizwa khona ngengoduso.
Intombi ibe isiyasina esegcaweni ngesikhathi isathi iyasina isidwaba sadabuka yilapho okusuke amadlozi eveza ukuthi bahlobene labo abagananayo. Kusuke sekufanele kubhekwe ukuthi bahlobene kanjani ngoba akukaze kuthi uma umakoti esina kudabuke isidwaba esigcawini. Njengoba sivezile ngenhla ukuthi abanye abantu basuke bengazi ukuthi bahlobene. Ngesinye isikhathi indaba isuke yonakale kumzali uma ingane yakhe angayitsheli imvelaphi yayo. Umlando wesibongo sakhe umuntu kubalulekile ukuthi asazi. Ngoba kuba inkinga uma sebetholana ukuthi bayizihlobo. Imvamisa yabantu abangazani ukuthi bayizihlobo basuke bengazi ukuthi isibongo esithile sihlangana kanjani nesinye. Kubalulekile ukwazi imvelaphi yakho futhi nabazali bazitshele izingane ukuthi zingobani kanye nethakazelo zonke zomndeni noma zesibongo.
Source: Bongiwe Mkhize, Inanda
Categories Culture Tags Abantu, Izinkolelo zesintu, Traditional Beliefs
1 thought on “Izinkolelo zesintu ngokuvezwa ngamadlozi ekhaya”
22/12/2018 at 5:58 pm
Ngicela ukwazi ngo mkhehlo